भिटेन यस्तै त हो नि ब्रो ! – Khabar Silo
भिटेन यस्तै त हो नि ब्रो !
बान्की नमिलेका जस्ता लाग्ने हरफहरु । यसमा प्रयुक्त ‘खाते’, ‘खलासी’ जस्ता शब्दावली उट्पट्याङ र अशोभनीय लाग्छ । यो तपाईं/हामीलाई लागेको कुरा हो, भिटेनलाई होइन ।
किनभने भिटेनले यिनै शब्दावली खेलाएर र्‍याप गीत गए । ‘खलासी’ शीर्षकमा । गीत उनका समवयीबीच पि्रय पनि छ । यस्तै र्‍याप गीतको गुरुत्व बलले तानिएका ठूलो जमात भिटेनको वरीपरी झुम्मिएका छन् ।
झट्ट सुन्दा त ‘भिटेन’ कुनै नामवाचक संज्ञा जस्तो लाग्दैन । सम्भवतः यसको अर्थ नेपाली शब्दकोषमा पनि नहोला । यद्यपि ‘भिटेन’ नाम र ‘खलासी’ शीर्षकको र्‍याप गीतको पछाडि एउटा घतलाग्दो कथा जोडिएको छ ।उनको सद्दे नाम चाहिँ, समीर घिसिङ । समीर घिसिङ कसरी भिटेन बने ?
समीर रौतहटमा जन्मिएका हुन् । त्यहाँ उनका एक गरिब र टुहुरो मित्र थिए । हितैषी । औधी मिल्ने । त्यही साथीले समीरलाई सम्बोधन गर्ने नाम थियो, भिटेन । तर, यसरी आफ्नो न्वारान गरेर फरक नाम दिएको उनलाई चित्त बुझेको थिएन । ‘भिटेन’ भनेर बोलाएको उनलाई अलिकती पनि मन पर्दैनथ्यो ।
तर, समयक्रममा ती साथी हराए । कहाँ गए कहाँ ? अत्तोपत्तो भएन । यता समीर चाहिँ र्‍याप गीत गाउन थाले । उनलाई साथीको यादले भने पछ्याइरह्यो । अन्ततः उनले तिनै साथीको समर्पणमा आफ्नो सार्वजनिक नाम राखे, भिटेन ।
भिटेनले थाहा पाएसम्म उनका ती साथी ‘खलासी’ भएका छन् । ‘भिटेन..भिटेन’ भनेर बोलाउने तिनै खलासी साथीको नाममा उनले र्‍याप गीत गाए, खलासी ।
‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’
अहिले युवापुस्तामाझ उखान-टुक्का जस्तै छ्यापछ्याप्ती भएको छ यो शब्दावली । सामान्य बोलीचालीदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यसको प्रयोग व्यापक छ ।खासमा भिटेनलाई चिनाउने र भिटेनलाई चिन्ने र्‍याप गीत हो यो ।
‘सही हो, सही हो
हामी यस्तै त हो नि ब्रो
जहिले यस्तै त हो नि हो
ठिकठाक आफ्नो ठाउँमा बस्छु
राम्रो गाउन सक्छु
खासमा यस्तै त हो नि हो
हामीलाई के सोचेको होला
अघि बढिसक्यो हेर भोटेको छोरा
हाँस्छु हसाउँछु म, नाच्छु नचाउँछु
चिल्याक्स पारामा मासु चपाउँछु
झाडु लगाउँछु म, डाडु ठटाउँछु
पार्टी हान्न आइज बरु, दारु मगाउँछु ।
आम युवाको मनोदशा झल्काउने यस्तै हरफहरुले भिटेनलाई ‘खास’ बनाएको हो । उनको यो स्वच्छन्द शब्दलहर हृदयबाटै प्रकट भएको छ । त्यसैले यसले युवापुस्ता हृदयमा झन्कार बजाइदिन्छ ।
त्यसो नहुँदो हो त आज भिटेनका पछाडि लाखौं युवाको लस्कर लाग्ने थिएन । उनी बेपर्वाह गाउँछन् । निस्फिक्री, निर्धक्क र निर्भिक छन् । जुन भाव उनको गीतमा झल्कन्छ । सम्भवतः भिटेन जस्तो गाउँछन्, त्यस्तै छन् । उनी जस्तो छन्, त्यस्तै गाउँछन् ।
अन्डरग्राउन्ड र्‍याप संगीतबाट दृश्यपटलमा आएको नाम हो, भिटेन । अन्डरग्राउन्ड र्‍याप ब्याटलबाट उनी चिनिँदै गए ।उनले १५ वर्षको उमेरमै गीत रेकर्ड गरे । शीर्षक थियो, गरिबी । यो गीत उनैले फुराएका हुन् । धुन उनकै हो । गीत रोमाञ्चक मात्र होइन, मर्मस्पर्शी पनि छ । उनका अरु गीतहरु पनि करिब यस्तै छन् । शीर्षक चाहिँ, चुरोट, बैनी, लफंगा आदि ।
आफ्नो जीवन-भोगाई मिसाएर गीत लेख्ने, गाउने भएकाले भिटेनको गीतमा एउटा जमात तुरुन्तै एकाकार भइहाल्छ । उनीहरुलाई लाग्दो हो, यो मेरो आफ्नो हृदयको गीत हो । मेरो हृदयको भाका हो । भिटेनले एउटा गीत लेखेका छन्, चुरोट । युवापुस्ताले औधी रुचाएको यो गीत पनि उनले आफू र आफ्ना साथीहरुलाई सम्झेर लेखेका बताएका छन् ।
गायकी बाहेक उनको अर्को परिचय भनेको थाङ्का आर्टिस्ट पनि हो । भिटेन उनका काकासँग काठमाडौं आएका थिए, थाङ्का पेन्टर बन्नका लागि । काठमाडौंमै उनले उच्च शिक्षाको पढाई पनि सुरु गरे । ‘मलाई पढाईमा मन नै नलाग्ने, पास हुन्छु भन्ने पनि लाग्दैनथ्यो’ भिटेनले भनेका छन्, ‘मेरो मन अरुतिर नै रहेछ ।’
उनको विद्यालय यात्रा त्यति सुखद् रहेन । लेखपढमा ध्यान दिनेभन्दा पनि अक्सर साथीभाइसँग हिँड्ने उनी अन्ततः आफन्तबाट टाढिए । त्यसबेला आफूले निकै अपमान झेल्नुपरेको नमिठो अतित छ उनीसँग ।
भिटेन अमेरिकी गीतकार/अभिनेता इमिनेमका डाइहार्ड फ्यान हुन् । भिटेन इमिनेमकै गीत सुन्दै हुर्किए । इमिनेमबाटै आफूमा र्‍याप संगीतको मोह अंकुराएको मान्छन् उनी । त्यसैले त उनले आफ्नो हातमा इमिनेमकै समर्पणमा हातमा ट्याटु पनि खोपाएका छन् । एउटा हातमा, डि-१२ र अर्कोमा ब्याड मिट्स एभिल ।त्यसो त उनी ट्याटु लभर पनि हुन् । कुनैबेला उनमा ट्याटु आर्टिस्ट बन्ने रहर पनि पलाएको थियो ।
अरुले के सोच्छ, अरुले के भन्छ ? भिटेनलाई ‘बाल मतलब ।’ उनलाई आफैभित्रको धुन सुन्नुछ । आफ्नै मनको गुञ्जन सुन्नुछ ।
भिटेन खासमा स्वच्छन्द प्रवृत्तिका छन् । उनी कुनै बन्धन र सर्तहरुमा बाँधिन रुचाउँदैनन् । आफूले जे देख्यो, जे भोग्यो, जे बुझ्यो त्यसैलाई उजागर गर्छन् । ‘र्‍याप गीत’ भनेको पनि यस्तै स्वच्छन्द रचना हो भन्ने उनको बुझाई छ ।
भिटेनले कानमा एउटा ट्याटु खोपाएका छन्, जसलाई उनी जंगली आदिवासीबाट प्रेरित भएर खोपाएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, जंगली युगमा रमाइरहेकाहरुको जीवन मलाई बाल्यकालदेखि नै रुचि लाग्थ्यो । उनीहरुको शैली, संस्कारले आफूलाई यसैपनि आकषिर्त गर्ने उनको भनाई छ ।
लामाले ल्याउने भए २ नम्बरी
पत्रकार, लेखक तथा निर्देशक दीपेन्द्र लामाको चौथो फिल्मका रूपमा २ नम्बरी नामक फिल्म निर्माण हुने भएको छ। फिल्मको राजधानीमा आयोजित एक समारोहबीच निर्माण घोषणा गरिएको छ। दीपेन्द्र लामाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्ने फिल्मले दुई साथीको कथा भन्ने बताइएको छ। फिल्ममा नायक दयाहाङ राई र पल शाह साथीको भूमिकामा देखिँदै छन्। उनीहरूलाई नायिका वर्षा राउत र […]
जब सुरविनलाई निर्देशकले शरीर देखाउन आग्रह गरे…
अभिनेत्री सुरविन चावला पनि अन्य अभिनेत्रीहरु जस्तै ग्ल्यामर इन्डष्ट्रिमा कास्टिङ काउचको सिकार बनेकी छन् सुरविनले एक अन्तर्वार्तामा कास्टिङ काउचको भयनक घटनाको खुलासा गरेकी छन् अहिलेसम्म उनी एक पटक होइन, दुई पटक होइन १ पाँचपाँच पटक कास्टिङ काउचको सिकार बनेकी छन् । सुरविनका अनुसार उनले तीन पटक साउथ फिल्म उद्योग र दुई पटक बलिउडमा कास्टिङ काउचको […]
‘छ माया छपक्कै’ का पोस्टरमा दीपक र केकीको माया
काठमाडौं – असोज २४ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ का दुई पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा दीपकराज गिरी र केकी अधिकारीलाई हाइलाइट गरिएको छ । नामैले पनि प्रेमभाव झल्काउने यो फिल्मलाई दीपकराज गिरीले लेखेका हुन् । जसकारण फिल्ममा कमेडीपन पनि हुनेछ ।सार्वजनिक दुई पोस्टरमध्ये एकमा दीपकराज गिरी र केकी अधिकारी मुस्कुराइरहेको […]
बारम्बार बिना कपडा किन छाइरहेका छन् सलमान ? खुलाए रहस्य